Olee otú ị na-anwale gị Mobile Internet Speed?
Ihe kacha na mgbalị ụzọ nwalee Internet ọsọ na ị na-na mkpanaka gị na bụ site na iji online ule ngwaọrụ na (N'eziokwu bụ weebụsaịtị) nwere wuru na-ọsọ tester. Otú ọ dị na downside nke na-ewere nke a na obibia bụ na ngwaọrụ mkpanaaka na nke ị chọrọ iji nwalee Internet ọsọ ga nwere Adobe Flash arụnyere n'ime ya.
Mgbe ị ọma arụnyere Adobe Flash na mkpanaka gị na ngwaọrụ, ebe a bụ ndepụta nke a ole na ole na saịtị na i nwere ike iji nwaa gị mobile Internet ọsọ:
MegaPath Speed ​​Ule Plus (URL: http://www.megapath.com/speedtestplus/) MegaPath si Speed ​​Ule Plus-enye gị ohere iji nwalee Internet ọsọ na gị Internet-nyeere ngwaọrụ. Ị nwere ike igosi na Internet ọsọ ule ziri ezi na gị obibi (ma ọ bụ site n'ebe ebe ị na-na ịnweta Internet ugbu a - ọbụna mgbe-agụ nke a), ma ọ ị nwere ike họrọ a dị iche iche obodo si ebe ị chọrọ ule-rụrụ site na saịtị.
Na mgbakwunye na odomo download na bulite ọsọ nke Internet na ngwaọrụ gị, saịtị na-achọpụtazi nke furu efu ngwugwu, jitters, na latency na ngwaọrụ gị nwere ike na-eche ihu mgbe data nnyefe.
Speed ​​Ule (URL: www.bandwidthplace.com)
Speed ​​Ule bụ ihe HTML5 dabeere website na ike ga-eji nwalee Internet ọsọ na gị laptọọpụ, kọmputa nke desktọọpụ, mbadamba, na ekwentị mkpanaaka gị. Saịtị bụ eluigwe na ala na ike ga-enweta site na ọ bụla nchọgharị weebụ gị oke. Onye ọrụ-enyi na enyi interface nwere dị iche iche na ngalaba tụọ na gosipụta download na bulite ọsọ tinyere ọnụ ego nke Internet bandwit na ngwaọrụ gị-na-anata na oge nke ule.
The mebere ngwaọrụ na-egosipụta na ibe weebụ nwekwara achọpụta na-egosiputa adreesị IP nke ngwaọrụ gị (na ị natara si gị Internet na-eweta ọrụ ma ọ bụ ISP).
Ihe kwukwara uru nke na-eji Speed ​​Ule bụ na iji nwalee gị mobile Internet ọsọ, ọ enye gị ohere ịhọrọ ihe nkesa enịm ke a kpọmkwem nke gị nhọrọ. Otú a ị pụrụ inwe obi ike na-atụ bụ ezi dị ka gị ebe obibi.
OOKLA SPEEDTEST bụ ọzọ nke na-ewu ewu weebụsaịtị iji nwalee Internet ọsọ na gị na desktọọpụ kọmputa, laptọọpụ PC, na ọbụna na mkpanaka gị na igwe.
The website na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ ọnọdụ gị na ndabere nke adreesị IP gị (na na-ahụrụ na-akpaghị aka ka anya dị ka ị na-emeghe saịtị), na-ahọrọ kacha nso dị ọsọ ule nkesa. The kensinammuo na mma interface egosiputa ọnọdụ gị na global map.
Ka anya dị ka ị na-amalite ọsọ ule, n'ozuzu ọsọ, na download na bulite gbapụrụ ọsọ na-gbakọọ na egosipụta na ihuenyo ya.
SpeedOf.Me bụ ihe Internet ọsọ ule website na-egosiputa ule na-arụpụta a onyeōzi chaatị na na kwa na a ezigbo oge ndabere mgbe eji na a desktọọpụ ma ọ bụ na laptọọpụ kọmputa. Ọ bụ ezie na mgbe eji na ekwentị mkpanaaka, ekwentị iwọrọke ga-enwe Adobe Flash arụnyere na ya, ule results na mobile ngwaọrụ na-egosipụta na a mfe ederede (na-enweghị ihe ọ bụla onyeōzi onodi).
Yana download na bulite ọsọ results, saịtị na-egosiputa na ọsọ ule nkesa na ọ na-eji tụọ Internet bandwit.
N'adịghị ka ndị ọzọ mobile nsụgharị nke Internet ọsọ ule weebụsaịtị, TestMy.net enye gị ohere igosi na download na bulite ọsọ ule iche iche, ma ọ bụ a eluigwe na ala ule tụọ ma ndị bulite na download gbapụrụ ọsọ na a jikọtara n'ụzọ.
The website dị maka ma desktọọpụ kọmputa / laptọọpụ PC na n'ihi mobile ngwaọrụ. Otu URL nke e nyere n'elu nwere ike ji mee ka ịnweta website ma nwalee Internet ọsọ results na ma mobile nyiwe na kọmputa.
Cheta na: Ọ bụ ezie na wụnye Adobe Flash bụ a dị mfe ọrụ, na ụfọdụ mobile ntị (ma ọ bụ ọbụna na ụfọdụ nyiwe) usoro nwere ike ịbụ ihe ịma aka, na e nwere ike ịbụ ụfọdụ incompatibilities dị ka mma.
Ọ bụ ezie na iji weebụsaịtị iji nwalee Internet ọsọ na-ada mfe, dị ka e kwuru n'elu, na nke na-Adobe Flash nnweta na / ma ọ bụ ndakọrịta bụ mgbe n'ebe ahụ. -Ewere nke a, nsogbu ike iwepụ site na iji ọ bụla atọ ọzọ ngwa iji na-enweta ọrụ mere.
Nanị Olee-azụ nke na-abịa tinyere obibia nke na-eji a mobile ngwa n'ihi na Internet ọsọ ule bụ na ngwa kwesịrị a ga ibudatara na awụnyere na ekwentị obodo nchekwa. Otú ọ dị nke a nke na-negligible atụle eziokwu na ndị dị otú ahụ na-agba ule ngwa ọdịnala na-enye ole na ole ọzọ ọkaibe atụmatụ na-ma ọ bụghị adịghị mgbe ị na-eji weebụsaịtị.
A ole na ole ngwa na i nwere ike iji nwaa gị mobile Internet ọsọ na-agụnye:
Sensorly - Sensorly a abụghị nnọọ mobile Internet ọsọ ule ngwa ma nwekwara ike nke na-enye gị elu-ụbọchị ọmụma banyere ebe map na na netwọk na ebe nwere na ihe ụdị Internet na ọsọ. Sensorly bụ ike nke na ịchọputa 3G, 4G, LTE, na 2G njikọ tinyere na ọsọ nke Wi-Fi Njikọta.
Nke a free Android ngwa nwere ike ibudata kpọmkwem site Google Play Echekwala site na isoro njikọ nyere n'okpuru:
SpeedSpot - ọzọ Android ngwa nke na-adịghị nanị nwalee ọsọ nke mobile Internet kamakwa okụt free dị Wi-Fi netwọk gị. Tinyere n'ịchọpụta na-emeghe Wi-Fi netwọk gị dị nso ebe, SpeedSpot nwekwara ike ịchọputa ọsọ na nke Wi-Fi hotspots 'Njikọta dị.
SpeedSpot akwado LTE, 4G, 3G, USB, ADSL, na DSL netwọk na nwere ike ibudata na arụnyere na gị gam akporo ngwaọrụ site na njikọ nyere n'okpuru:
Speed ​​Ule Ìhè - Nke a bụ fechaa Android mobile Internet ọsọ ule na ngwa na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ ụdị dị Internet njikọ, na-agbanwe ya nhazi ya gbagote na kacha mmepụta na igosipụta kasị ezi results. The ngwa bụ ike nke na ịlele ahụ download ọsọ, bulite ọsọ, na ọ bụrụ na ihe ọ bụla, na latency na ngwugwu nnyefe.
Speed ​​Ule Ìhè nwere ike ibudata site Google Play Echekwala site na ịga na njikọ nyere n'okpuru:
OOKLA SPEEDTEST - aka Speedtest.net mepụtara OOKLA bụ dị ka a downloadable ngwa n'ihi na iOS ọrụ. The ngwa (nakwa dị ka saịtị) bụ ewu ewu n'etiti ọtụtụ nke Internet ọrụ gafee n'ụwa mgbe ọ na-abịa-anwale Internet ọsọ.
The ngwa nwere ike ibudata site na njikọ nyere n'okpuru:
Speed ​​Ule & Wi-Fi Finder - ọzọ ngwa n'ihi na-anwale Internet ọsọ na gị iPhone ma ọ bụ iPad. Na 91% nke onye ọrụ afọ ojuju larịị, ngwa na-mepụtara Frederik Lipfert na bụ oru oma iji tụọ ọsọ nke dị Wi-Fi na cellular n'ókè maka Internet. Ọsọ ule rụrụ site Speed ​​Ule & Wi-Fi Finder egosipụta kasị ezi results n'ime 20 sekọnd.
Ị nwere ike ibudata ngwa si n'okpuru njikọ:
Speedtest - Speedtest mepụtara Xtreme Labs Inc. bụ a free mobile Internet ọsọ ule ngwa n'ihi na iOS ọrụ. The ngwa bụ ike nke na-anwale dị ọsọ maka Wi-Fi, EDGE, na 3G njikọ.
Speedtest nwere ike ibudata site na njikọ nyere n'okpuru:
Ihe na-emetụta Internet Speed ​​Ule
Na ọtụtụ ikpe, ị nwalee Internet ọsọ na mkpanaka gị na ntị ka ego ọ bụrụ na ị na-na ihe ị na-akwụ ụgwọ maka gị ISP. Otú ọ dị, e nwere ihe ole na ole ihe na-nwere ike imetụta Internet ọsọ ule. Ụfọdụ n'ime ha na-depụtara n'okpuru:
Alternate Downloads - Jide n'aka na ị na-agaghị na nbudata ihe ọ bụla na mobile bụghị akpaaka-emelite ya ngwa (s) ma ọ bụ software mgbe n'ịrụ Internet ọsọ ule. Ọ bụrụ na nke a mere, ule nwere ike na-anaghị egosipụta ezi ihe results.
Agbanwe agbanwe Njikọta - Iji nweta ezi ihe Internet ọsọ ule results, jide n'aka na ị na-a ọnọdụ ebe ị ga-esi na mkpuchi nke netwọk. Ọnọdụ ebe netwọk nwere obere ma ọ bụ enweghị oti mkpuchi ka saịtị / ngwa ọdịnala na-egosipụta etịbe results n'ihi na gị mobile Internet ọsọ ule.
Mobile Internet ọsọ ule na-rụrụ iji hụ na ị na-na-na kpọmkwem Internet bandwit n'ihi na ihe ị na-akwụ ụgwọ gị ISP. Eji nke ọ bụla ngwa ma ọ bụ a website iji nwalee Internet ọsọ na mkpanaka gị na-enyere gị aka tụọ dị Internet bandwit ma chọta ihe ọ bụla dị na-emeghe wireless netwọk na i nwere ike iji aka jikọọ na Ịntanetị.
Olee otú ị Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka LG
> Resource> Android> Olee Ị nwalee gị Mobile Internet Speed?